Usuku lukaMama 2015: izinkondlo kanye nezingoma zokuhalalisela omama
Usuku lukaMama 2015: ukuhalalisela kakhulu evesini nasezingoma
Usuku olubalulekile noluthintekayo eRussia lwaqala ukugubha lwakamuva nje - okokuqala okokuqala izakhamuzi zaseRussia zagubha ngo-1998. UMongameli wangaphambili uBoris Yeltsin umemezele ngesikhathi kusukela manje njalo ngeSonto lokugcina likaNovemba bonke abaseRussia bangahalalisela omama abathandekayo ngeholide elihle. Ngakho, uSuku lukaMama luka-2015 luzogubha lonke izwe isikhathi sesishiyagalombili.
Izimpande zalesi sikhokhelo zivela eYurophu ephakathi - emazweni aseNtshonalanga Yurophu inqubo efanayo iye yagcinwa isikhathi eside ukuhlonipha omama. Kodwa, njengoba izazi-mlando ziqinisekisa, ezikhathini zasendulo, amaholide afanayo ayekhona phakathi kwezizwe ezahlukene zomhlaba - ngalezo zinsuku intela yayikhokhwa ngaphezulu kwezidalwa zesifazane ezinenganekwane, ezifakazela ukuzalwa kokuphila.
Usuku lukaMama luka-2015 lugujwa nini eRussia?
Lo nyaka, njengoba sekuvele kulula ukuqagela, zonke izakhamizi zaseRussia zingakhumbula usuku lwamaMama ngoNovemba 29 ngesilinganiso esikhulu ngeSonto. Leli holide, naphezu kwemikhuba yasentshonalanga, ngenxa yokuthi weza kithi, sesivele sithandana nabantu abaningi bakithi. Ngosuku lomama, izingane zinikeza izimbali nezipho, amakhadi nemikhumbuzo yazo, futhi okuyiyona nto ebaluleke kakhulu ukunakekelwa, uthando nokubonga ... Ungawugubha leli holide ngezindlela ezahlukene: nomndeni wakho noma kumakhonsathi emikhosi, abazali emgwaqweni noma benokudla isidlo somndeni esitolo sokudlela.
Siyakuhalalisela uMama ngosuku lukaMama
Noma yimuphi umama uyojabula kakhulu futhi ujabule ngosuku lwakhe, uma efunda izinkondlo ezinhle ngosuku lukaMama noma ehlabelela izingoma zeholide. Ngezansi sikukhethile ukukhethwa okuhle kwezinkondlo nezingoma.
Izinkondlo ezinhle nezithinta
Izinkondlo eziyojabulisa umama wakho futhi uzozizwa ejabule kakhulu emhlabeni wonke: Ngifuna kakhulu emhlabeni, Bonke omama bahlala bejabule. Njalo ukwenza abantwana bajabule, Futhi bonke abathandekayo bafezeka. Usuku lomama liholide elihle, Bonke omama bethu bangumnsalo wethu. Vumela amehlo abo akhanyise ngenjabulo, Futhi isibhakabhaka sizocaca.
Mama, ngiyabonga, othandekayo! Siyabonga ngothando, ngokufudumele. Ngikuhalalisela namuhla Futhi ngifisa sengathi konke kwaba nenhlanhla! Okuhle kakhulu emhlabeni, ngiyazi, ngiyakuthanda ngaphezu kokuphila. Umama, othandekayo, ngiyakuhalalisela! Futhi ngibonga ngakho konke!
Usuku lomama luyiholide elikhulu, Ngempela, owesifazane ngamunye ngumama! Futhi ngokuqinisekile sidinga ukuhalalisela omama, Akufanele sikhohlwe ngalokhu. Wena ngeholidi, othandekayo, izihlobo. Futhi ungavumeli izinkinga zize kuwe. Futhi ngiyaqiniseka ukuthi ngifisa ukuba nonke nithande futhi nenjabulo kumama wakho. Phakade. Phakade!
Kukhona igama elilula kangaka, Noma ubani oliqondayo, Ngokuba inhliziyo yomuntu noma ubani - ongcwele, Ngoba konke kunakho: Ukukhathalela, nokuthandana, nobumusa, Amandla nokumamatheka, Ukulala kuqala, Ukulala ubumnandi, Emlonyeni wezingane ubisi. Amandla aleli gama anenkani, Wonke umuntu empilweni yakhe wathi, Emva kwakho konke, nguye, lo mama, Ukuqala kwethu kwaqala. Vumela wonke umama namuhla Kusukela ezinganeni uzwe amazwi: Habula ujabule, Mama, sikuthandayo!
Wena ubaluleke kakhulu emhlabeni, Wena ujabule, ububele, umusa, Wena wonke umzuzu onesibopho kithi, Ungumama wami, yilokho okwenzekayo. Futhi namhlanje ngikuhalalisela, othandekayo, kusuka enhliziyweni, Ngaphandle kwakho, angikwazi ukucabanga impilo, Wena, Mama, unakekele impilo yakho. Hlala emfudumeni wakho nomphefumulo wakho, Kholelwa ukuthi konke kuyoba kuhle, Futhi ungalokothi ugule nokuguga Ungavumi ukugodla ewindini lakho. Ukumomotheka akupheli ebusweni bakho obukhanyayo, Vumela konke okufiswa ngumphefumulo, Yiqiniso, uzokwenza.
Umama womdabu, omnene, omnandi, Kusukela enjabulweni, vumela amehlo akho akhanye! Ungumngane wami omuhle kakhulu, Amazwi awakwazi ukuchazwa! Izandla zakho zithandeka kakhulu, Zisekelwa njalo, uma kungazelelwe, ngingazi yini ngisho neziphepho zeqhwa: Emva kwakho konke, unami futhi angidingi muntu! Futhi kuleli holide uMama kaMama abizwa ukuba avume kuwe, Mama, ngifuna ube ilanga lami elikhanyayo, Lokho engikuthanda kakhulu!
Kulo suku lokugubha ekwindla Ezingcingo zokuhalalisela Cishe cishe eminye imisho igama elithi "umama" liphindaphindiwe. Futhi-ke intwasahlobo ibonakala njengokungathi kungazelelwe, kuyanda futhi kuphephe, ngoba konke kuyithandeka kakhulu kuMamma ngisho nasezingane ezikhulile. Umama kuphela ozosinika konke ukufudumala nesisa kumuntu wokugcina, Futhi uzokwazi ukuthanda ngaphandle kwemingcele, Futhi angabeka icala. Ngakho-ke, phakathi kokuhalalisela Ukuxolisa, okukhulu nokuncane, Siyacela wonke umuntu, ngaphandle kokunye: Yiba kahle! Njalo ube ngumama!
Ngalolu suku ngitshela umama ngomoya ophansi ngithi "Ngiyabonga" Ngokuba ukumomotheka, ukuzwelana nokukhathalela, umsebenzi wangunaphakade weMama: Induduzo, ukukhathazeka nokukhuthaza, Amakhulu izikhathi zifana nokuphindaphinda. Ukusekela, usizo nokudumisa, Scold, fundisa okuthile. Lungiselela, uhlanganise, ugeze, uzwele, ufunde izifundo, Vikela, uphumule unganiki, Bonke baqonde, esifubeni sakho ukuze ucindezele. Ngokuvamile omama abakwazi ukulala ebusuku, Impilo yabo iyancibilika njengekhandlela. Kusuka ekukhathazayo nasezinkathazweni zokucindezeleka, uSedina uwela emathempelini akhe. Wonke umuntu unomama. Enye. Phakade. Futhi akukho okubizayo. Ukukhanya okwenziwe ngaphandle kokulala Amamama akwenzi omncane. Kodwa amazwi othando nokubukeka okufudumele, Yebo, "ngiyabonga", kusho uMamochka osheshayo noma yikuphi ukuzwakalisa, Uyokwenza kube mnandi futhi kube mnandi kakhulu.
Izingoma zoSuku lukaMama
Funda inkondlo - iyamangalisa, futhi ingcono nakakhulu, uma uphakamisa ukubonga kwakho ngezingoma. Uyesaba ukuhlabelela - cela abangane noma izingane zakini ukuzokusiza kule ndaba. Izandla ezithandekayo zithinta, Futhi wena umamatheka kakhulu Mama, Mama, ngiyakuthanda, Nomama, ngiyena ojabula kakhulu. Umama, umama othandekayo othandekayo, Umama omuhle kakhulu. Umama wakho onakekelayo, Ungithanda kanjani. Uma ngikhathazekile, ungiduduza, Nginike iseluleko sakho futhi inkinga izoxazululwa. Umama ungumngani wami, ukusekela kwami, Ngiyabonga ngokungifundisa ukuthandaza. Umama, umama othandekayo othandekayo, Umama omuhle kakhulu. Unjani umama okhathalelayo, Uthanda kanjani ... Mama, unomusa othandekayo, Unina omuhle kakhulu. Umama wakho onakekelayo, Ungithanda kanjani. Umama, umama othandekayo othandekayo, Umama omuhle kakhulu. Unjani umama okhathalelayo, Uthanda kanjani ... Mama, unomusa othandekayo, Unina omuhle kakhulu. Umama wakho onakekelayo, Ungithanda kanjani.
Uyongivusa ekuseni, uthinte izinwele kahle, njengokungathi njalo, kiss ngothando, futhi ukumomotheka kuzongishukumisa. Lapho useduze nami, ngizizwa ngishushu futhi ngithulile emphefumulweni wami futhi ngiphile. Emhlabeni wonke, nguwe kuphela thina futhi mina Futhi ngicula ngakho, mama. I-Chorus: Umama ungcono kakhulu emhlabeni Ufana nelanga elikhanyayo empilweni yami. Umama ungumngani omkhulu kakhulu emhlabeni. Ngithanda kangakanani ukufudumala kwezandla zakhe. Umama, umama, umama. Umama, umama, umama. Uzoqonda njalo futhi uthethelele konke. Ngiyazi, awulali ebusuku. Ngoba uyangithanda. Ngoba ngiyindodakazi yakho. Lapho useduze nami, ngizizwa ngishushu futhi ngithulile emphefumulweni wami futhi ngiphile. Emhlabeni wonke, nguwe kuphela thina futhi mina Futhi ngicula ngakho, mama.
Ngelanga elimnandi, umama uyangivusa ekuseni bese evuka ngokumomotheka. Ukumamatheka kubo bonke abantu. Umama, umama, umama onomusa , umama, umama onomusa omuhle Umama, umama, umama onomusa omuhle Ngezinye izikhathi kwenzeka ngezinye izikhathi umama unzima kakhulu Ukulalela umama wami, ngizohlala nginakho konke engikusizayo umama, umama, umama othandekayo umama, umama, umama othandekayo
Umama yilona igama lokuqala, igama eliyinhloko kuzo zonke iziphetho. Umama wanginika ukuphila, Umhlaba wanginika mina nawe. Ngakho-ke, ngoMama ubuthongo obengenalutho uyokhala, Njengoba kukhona indodakazi, ukuthi kukhona indodana yakhe - Kuphela ekuseni umama uzolala. Umama yilona igama lokuqala, igama eliyinhloko kuzo zonke iziphetho. Umama umhlaba nesibhakabhaka, Ukuphila kunginike mina nawe. Kwenzeka - uma kwenzeka ngokuzumayo Ekhaya lakho, inkathazo, umama - engcono kakhulu, umngane onokwethenjelwa - Uzohlala nawe njalo. Umama - igama lokuqala, Igama eliyinhloko kuwo wonke umama Umama wanikeza impilo, Izwe linikeza mina nawe. Kuyenzeka - uzokhula Uzobhamba njengenyoni, Noma ngabe ungubani, uyazi ukuthi unina wakho - Njengaphambili, umntwana othandekayo. Umama - igama lokuqala, Igama eliyinhloko kuwo wonke umama Umama wanikeza impilo, Izwe linikeza mina nawe.
Umama, umama - kuleli gama elikhanyisa umama umama, umama - ayikho igama elingcono emhlabeni wonke Umama, umama - obani ozalwa ngaphezu kukaMa-a-ma-ma-ama - usuke entwasahlobo emehlweni akhe. Umama, umama emhlabeni unomusa wabo bonke umama, umama unikeza inganekwane, unikeza uMama ukuhleka, umama kithi ngezinye izikhathi usizi uMa-ma-ma-ma-ma uzozisola futhi athethelele. Umama, umama ufunda umama wokuqala, umama - osithandayo kakhulu umama, umama uyinkosikazi yezandla ezithandekayo uMa-ma-ma-ma-ma ungumngani omkhulu kakhulu umama, umama - ngaleli gama ilanga likhanya Umama, Mama - ayikho igama elingcono emhlabeni Mama, Mama, uthele ingoma ngesihlabelelo Ma-ma-ma-ma, sithina ngakho
Usuku lukaMama luka-2015 luseseholide kakhulu. Kodwa-ke, uzovuma ukuthi kuyamangalisa kakhulu ukuthi ezweni lethu umama osebenzayo nokunakekela izingane waziwa ngempela! Amaholide anjalo ngokuqinisekile akubalulekile kuwo wonke owesifazane. Oomama bethu, njengabomama bezinye amazwe, bafanelwe amagama amahle kakhulu. Futhi ngalolu suku, ake sikhumbule ukuthi ubani thina, okokuqala, kufanele sithole impilo yethu - omama bethu abathandekayo!
Ikhalenda lezinwele kanye nezinzipho ze-Lunar lithengiswa ngoJanuwari 2018: izinsuku ezinhle zama-oracle kumatafula
Ukuqagela ukuthi yini le nto isetshenziselwe?
Indlela esikhohliswa ngayo kuma-lottery aseRashiya
Ugarnoe video mayelana namakati kanye nezingane: Okumnandi futhi okumnandi ezinyembezini
UDmitry Peskov uzohalalisela uTatiana Navka ngemuva komsebenzi
Shish kebab kusuka amakhowe kuhhavini
I-Lenten Puff Pastry
I-Casserole ne-isipinashi casserole
Ukusebenza Kwelinye Izwe Labesifazane
Indlela yokunqoba isifo esingapheliyo sokukhathala
I-Elixir yaseKorea: I-Herbal Drop Mist ye-Spray-Fluid Erborian
Ukuhleka kwandisa izimpilo zabantu
I-patties ene-filling yokukhetha kusuka
Indlela yokwenza indoda ishade
Umbala wezinwele ezifake imfashini, Winter 2015-2016 (isithombe): yiziphi imibala nezinwele zezinwele ezisemfashini ngenkathi ye-Autumn-Winter 2015-2016?
Indlela yokufaka ingane isifiso sokufunda